Azonao atao ny mandamina ny script-nao tsirairay ho Pens, manambatra azy ireo ho Projects (multi-file editor), na koa manangana fanangonana. Izy io dia tranokala portfolio miasa ho an'ny kaody front-end izay ahafahanao manaraka mpanoratra hafa, mandoka tetikasa hafa nozarain'ny besinimaro ho anao manokana, ary mianatra koa ny fomba fanaovana zavatra mahafinaritra amin'ny alàlan'ny fanamby.
Ny kinova aloa, CodePen Pro, dia manolotra fiasa fanampiny an-taonina ho an'ny fanatsarana ny fampiasa na ekipa - ao anatin'izany ny fiaraha-miasa, ny fizotrany, ny fampiantranoana ny fananana, ny fomba fijery manokana, ary na ny tetikasa napetraka miaraka amin'ny fonenanao manokana aza. Ary, mazava ho azy, ny CodePen dia manome trano fitahirizana lehibe miaraka amina fampidirana Github izay ahafahan'ny ekipa iray manontolo miasa. Raha te hizaha kaody tsotra toa ahy ianao, ny CodePen dia fitaovana sarobidy.